Ukuhlukana kweNyama Zengulube
Umkhakha we-ngulube waseNingizimu Afrika ukugxila ekukhiqizeni inyama ephilile kubangele inyamazane yengulube yaseNingizimu Afrika enamafutha aphansi kunezinkukhu ezivela kwamanye amazwe amaningi. Ngaphandle kwalokhu, ingulube yaseNingizimu Afrika yinto yokudla okunomsoco, ecebile ama-amino acid, amavithamini namaminerali, enezilinganiso ezincane ze-cholesterol namafutha amaningi agcwele.
I-South African Pork Producers Organisation (SAPPO) ku-Complete Guide eya eNingizimu Afrika Ingulube ibhala lokhu.
Izindwangu ezinomdlandla ezinqamukile ziyakusondela ekupheleni kwentamo yesidumbu futhi, ngokusho kwe-Complete Guide eya eNingizimu Afrika yengulube, yizona zithole ezinomsoco kakhulu, ezinamathenda amaningi ozothola. Kuyinto enhle ukugcoba noma ukukhipha ama-pan. Isibambo esibi singabuye sibe yi-cubes ze-kebabs, i-stir-fries, i-curries noma i-stews.
Ngaphandle kwalokho, i-shoulder blade ingasuswa, iboshwe noma ifakwe esikhwameni semifino ye-oven ekhethiwe, noma i-shoulder stopper ingasuswa kumsizi omkhulu wehlombe. Umkhumbi uyinqunyiwe engenamaphesenti anesisindo esihle, okungcono kakhulu ekugayeni i-ovini.
Isibambo singadonswa futhi sigxilwe noma sishiywe ngethambo endaweni yokugcoba i-oven noma ukusika ama-chops okulungele ukucwenga ama-pan, ama-barbeque noma ukugcoba, noma ngaphandle kwe-sauce noma ngaphandle kwe-sauce.
I-loin ingase isetshenziswe njenge-oven egobile ngethambo noma lingenalutho, ne-roast ebizwa ngokuthi i-saddle uma i-loin ingahlukanisi zibe izingcezu ezimbili. I-loin nayo ingahle isuke ibe yizinhlayiya zethenda futhi ezihlwabusayo, ezingaba okuthosiwe, okuyizinyosi noma eziboshwe, noma ngaphandle kwe-marinade noma isiphuzo sokunambitha.
I-Chump ingaba yi-deboned noma ijabule ngokuphelele emlenzeni njenge-oven enkulu. I-chump ingabuye yahlulwa ibe yi-chops, efana ne-rump steaks ye-carcass yengulube, ngokusho kwe-Complete Guide eya eNingizimu Afrika yengulube. I-chops ingafakwa, i-pan-fried noma i-barbequed, noma ngaphandle kwe-marinade.
Umlenze wonke kuyindlela enhle futhi yokonga yokukhonza iqembu elikhulu labantu. Umcibisholo angasusa ithambo bese ebopha umlenze ukuze aqiniseke ukuthi ukuma ngisho nokudweba okulula kuphekwe. Umlenze ungahlukaniswa waba ama-roast amabili amancane, i-flank ne-silverside ebanzi, noma uthathe ama-cubes noma amaqabunga ama-kebabs, ama-scry-fries, ama-stews noma ama-curries. Ngaphandle kwalokho, ama-schnitzels, ama-steaks noma ama-chops angadliwa emlenzeni ukuze abe ne-pan-fried, eboshwe noma e-barbequed.
Ama-shank ajwayelekile aphulukiswa futhi aphumayo ukuze akhiqize i-"Eisbein". Kungase futhi kuhlotshwe zibe izingcezu ezincane, okungcono kakhulu izitsha zokupheka okuphuza, njenge-stews, potjiekos kanye nama-curries.
Isibeletho singase sijabulele sonke, sinalo noma ngaphandle kwethambo, njenge-oven esiphunduwe noma sisikiwe sibe yimichilo, ama-rashers noma i-streaky ingulube. Ngokusho komhlahlandlela, lezi ziqephu zingcono kakhulu uma ziboshwe ngamalahle ashisayo, noma ngaphandle kwe-sauce noma i-marinade.
Isifuba lapho ama-spareribs anqunywa khona. Zingaba marinated, basted and grilled kuhhavini noma ngamalahle. Isifuba singasetshenziselwa konke njenge-oven, noma ngaphandle kwethambo.